Properties for Sale in Hlegu - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Hlegu
SL20-003038, For Sale Land, ရဲမွန်အုပ်စု၊ ဂျပန်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန် လှည်းကူးမြို့နယ်တွင် လန (၃၉)...
32,325 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10190887
အမှတျ ၇ လမျးမေးတငျ လန-၃၉ မွေ ၅. ၂ ဧက ရောငျးမညျ။
Phone No. To Contact WINNER ESTATE. & GENERAL SERVICES
Ad Number S-10151699
WINNER ESTATE. & GENERAL SERVICES Close
VIP ရပျကှကျသနျ့ လမျးကယျြတှငျပွငျဆငျပွီး လုံးခငျြးအိမျအမွနျရောငျးမညျ
Ad Number S-10119519
လှညျးကူး အမှတျ၂ လမျးမကွီးပျေါမှ ဘိုးဘှားပိုငျမွကှေကျအရောငျး
4,850 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Myanmar Ray Real Estate Agency
Ad Number S-10117196
Sale 80' 60' land only
Ad Number S-10110074
350 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10105538
အမွနျလမျး ၁၂ မိုငျ မွကှေကျအရောငျး
Phone No. To Contact Shwe Naing Lin Real Estate
Ad Number S-10103248
Shwe Naing Lin Real Estate Close
Firm land for sale
Phone No. To Contact Handy Man Real Estate
Ad Number S-10089597
Handy Man Real Estate Close
အမှတျ၃လမျးမပျေါ အမွနျလမျးZeroမိုငျအနီး ဧက၃၀ရောငျးမညျ
Phone No. To Contact iGolden Myanmar RealEstate Co.,Ltd
Ad Number S-10084859
iGolden Myanmar RealEstate Co.,Ltd Close
လှည်းကူးမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသောမြို့နယ်ဖြစ်ဖြစ်သည် ။ မြို့နယ်၏ အနောက်ဘက်တွင် တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၊ မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တို့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(ပဲခူးမြို့နယ်) ၊ တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် အရှေ့ဒဂုံ ၊ မြောက်ဒဂုံ နှင့် မြောက်ဥက္ကလာပတို့ဖြင့် ဝန်းရံတည်ရှိသောမြို့နယ်ဖြစ်သည် ။ လှည်းကူးမြို့နယ်တွင် ရန်ကုန်မြို့အတွင်းနေထိုင်သူရေလုံလောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဧက ၇၀၀၀၀ ကျယ်ဝန်းသောရေဂါလန်ပေါင်း ၉၀ မီလီယံသိုလှောင်နိုင်သည့် ငမိုးရိပ်ရေသိုလှောင်ကန်တည်ရှိသောမြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီး ဖြတ်သန်းသွားသည့် မြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ ရန်ကုန်မြို့၏ မြို့ဝင်ဝဟဆိုနိုင်သလိုအရေးပါသော မြို့နယ် တစ်ခုဖြစ်သည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော်လှည်းကူးမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ အရေးပါသောမြို့ဝင်ဝတစ်ခု ဖြစ်သလိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောမြေကွက်ကျယ်ကြီးများရှိသည့် မြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ်ပေသည် ။